Arch Linux + KDE Kuisa Log: KDE SC Kuiswa | Kubva kuLinux
Arch Linux + KDE Kuisa Log: KDE SC Kuisirwa
Isu takatoona kuti sei gadza Arch Linux uye gadzirira iyo system, saka ikozvino yave nguva yekuisa KDE inova iyo Desktop Nzvimbo yandinoshandisa.
Chinhu chekutanga chatinofanira kuisa mapakeji ane chekuita neXorg. Sezvo munhu wese aine zvaari kuda, izvo zvavanofanira kuita kuita:
Izvi zvinodzosera rondedzero yemapakeji ane chekuita neXorg seizvi:
:: Kune nhengo makumi manomwe nenomwe muboka re xorg: :: Yakawedzera repository 77) font-misc-ethiopic 1) xf2-input-evdev 86) xf3-input-joystick 86) xf4-input-keyboard 86) xf5-input-mouse 86) xf6-input-synaptics 86) xf7-input-vmmouse 86) xf8-input-void 86) xf9-video-ark 86) xf10-video-ast 86) xf11-video-ati 86) xf12-vhidhiyo-cirrus 86 xf13-vhidhiyo-dummy 86) xf14-vhidhiyo-fbdev 86) xf15-vhidhiyo-glint 86) xf16-vhidhiyo-i86 128) xf17-vhidhiyo-intel 86) xf18-vhidhiyo-mach86 64) xf19-vhidhiyo-mga 86) xf20 -video-modesetting 86) xf21-vhidhiyo-neomagic 86) xf22-vhidhiyo-itsva 86) xf23-vhidhiyo-nv 86) xf24-vhidhiyo-openchrome 86) xf25-vhidhiyo-r86 128) xf26-vhidhiyo-ine utsinye 86) xf27 - vhidhiyo-siliconmotion 86) xf28-vhidhiyo-sis 86) xf29-vhidhiyo-tdfx 86) xf30-vhidhiyo-trident 86) xf31-vhidhiyo-v86l 4) xf32-vhidhiyo-vesa 86) xf33-vhidhiyo-vmware 86) xf34- vhidhiyo -voodoo 86) xorg-bdftopcf 35) xorg-docs 36) xorg-font-use 37) xorg-mafonti-38dpi 100) xorg-mafonti-39dpi 75) xorg-mafonti-encodings 40) xorg-iceauth 41) xorg- luit 42) xorg-mkfontdir 43) xorg-mkfontscale 44) xorg-server 45) xo rg-sessreg 46) xorg-setxkbmap 47) xorg-smproxy 48) xorg-x49perf 11) xorg-xauth 50) xorg-xbacklight 51) ​​xorg-xcmsdb 52) xorg-xcursorgen 53) xorg-xdpyinfo 54) xorg-xdriinfo 55) xorg-xev 56) xorg-xgamma 57) xorg-xhost 58) xorg-xinput 59) xorg-xkbcomp 60) xorg-xkbevd 61) xorg-xkbutils 62) xorg-xkill 63) xorg-xlsatoms 64. 65) xorg-xmodmap 66) xorg-xpr 67) xorg-xprop 68) xorg-xrandr 69) xorg-xrdb 70) xorg-xrefresh 71) xorg-xset 72) xorg-xsetroot 73) xorg-xvinfo 74) xorg-xwd 75) xorg-xwininfo 76) xorg-xwud Pinda sarudzo (default = yese):
Isu tinongofanirwa kusarudza dzatinoda uye ndizvozvo, tichiisa iyo nhamba pamberi pezvatinoda kuisa. Muchiitiko chekuva inopfuura imwe sarudzo, tinoita sarudzo dzakawanda dzichipatsanura manhamba nemakoma.
Iye zvino kuisa KDE tinogona kuzviita nenzira nhatu
Izvi zvichaisa mapakeji zvakareoooodoooossss KDE. Iyi sarudzo inotora nguva yakareba kwazvo kune ese mapakeji iwe aunoda kurodha pasi, asi inotisiira iyo Desktop Nharaunda yakagadzirira, nezvose zvatinoda uye kunyangwe izvo zvatisingade.
Iyi sarudzo inotibvumidza kudzora zvishoma zvatiri kuda kuisa, nekuti zvinotibvumidza kusarudza meta-mapakeji ane chekuita neakasiyana mabasa eKDE. Iyi ndiyo nzira yandaishandisa uye zvese zvakandishandira kekutanga.
# pacman -S kde-base
Kana isu tichiziva zvatiri kuda uye izvo zvatinofanira kuisa mumashure, iyi sarudzo inouya inobatsira nekuti inongomisikidza izvo chete zvatinoda kwatiri KDE inoshanda nemazvo. Zvino gare gare isu tichaisa mapakeji atinozoshandisa.
Ko kana isu tisingakwanise kukanganwa kuisa pasuru pamwe nechero yesarudzo idzi:
# pacman -S kde-l10n-es
Zvino chii KDM kutanga isu tinofanirwa kumisa sevhisi:
Uye ndizvozvo. Isu tinotangazve uye isu tinogona kupinda yedu KDE.
Kana KDE yapera, munhu wese anofanira kuenderera mberi nekuisa mapakeji avanoda. Mune yangu nyaya, kune akawanda mafomu andinoshandisa, ayo andinonyora pazasi:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Dzidziso / Mabhuku / Matipi » Arch Linux + KDE Kuisa Log: KDE SC Kuisirwa
Mubvunzo; Izvo iwe zvaunoisa mabhinari kana iwe unotora zvinyorwa uye unounganidza? Ndine urombo kana ndiri kukumbira truism, asi ini handizive iyo distro uye izvo zvandakanzwa ndezvekuti ndeyekunyora mune maitiro e gentoo.
Binaries. Kudhinda kunosarudzika, kuburikidza nezvakareruka kuvaka zvinyorwa, izvo zvisingagadzirise kutsamira, kana kubata nzira dzekuunganidza; mune mamwe mazwi, haina kumbobvira yaita saGentoo.
Iwe wakangondibatsira kuti ndisvetuke kuyedza Arch kamwe (ndanga ndichida kwemakore akati wandei, asi ini ndinogara ndichimira izvi (kubvira kutanga kunyora ini zvirinani kushandisa FreeBSD 😉)).
Ndiri kufara kuti yakushandira iwe
Edza MANJARO, Arch yevanhu
Inoisa zviri nyore seUbuntu
Uye kana iwe uchida, iwe une ese arch simba rekugadzirisa
Sevha yakawanda nguva
Arch _es_ yevanhu 😉
Kunyangwe hongu, Manjaro yakavakwa zvakanaka uye inochengetedza yakawanda nguva mukumisikidza kwayo, mazuva mashoma apfuura ndakaedza 0.86 Openbox uye inoshanda chaizvo, ini ndoda kuifarira kupfuura ArchBang!
Ehezve, iyo KDE SC vhezheni yeManjaro ndicho chakakora uye chakaipisisa chinhu chandati ndamboona>: [
Arch yevanhu hahaha yakandiseka, chokwadi ndechekuisa arch haina kunyanya kuoma zvinongokutorera iwe nguva kekutanga asi kana wajaira, unosiya OS yako sezvaunoda, kunze kwekuve neayo archwiki mune yako android kuitevera!! Ini ndinosiya iyi link kune avo vanoda! kwaziso Ariki
Mubvunzo mumwe… Ndeipi theme yeplasma yaunoshandisa? Uri kuenda kushandisa qtcurve here? Smaragd?
Ini ndinoshandisa iyo yakavhurikaSUSE theme. Uye hongu, ini ndinoshandisa QtCurve futi.
Nemusoro weplasma weKde, unoreva Produkt? Muchiitiko ichocho kune musiyano wekutanga (toni dzeorenji) kana iyo vhezheni inosanganisirwa mukuvhura 12.3 (girini toni), kana iyo yekupedzisira, iwe unogona kuigovana?
Ehe, ndinoreva iyo yakavhurikaSUSE musiyano. Unogona kuitora kubva pano.
Ndiregererewo elav, asi nei uchivaka yako Arch + KDE kana iwe uchitova ne distro ine yakanyanya kunaka maongororo, iri CHAKRA?
Uku kungoziva kuti sei, pamwe ungadai wakabvisa matanho aya ese, asi nenzira imwechete iwe unokosheswa, kuwedzerwa kune vaunoda!
Handifarire kuti vari kudzora mafomu andiri kuda kuisa, uye ndinoshandisa mamwe ari GTK. Iwo akachengetwa neChakra akafanana neArch's? Kana zvisiri, hazvishande kwandiri, nekuti ini ndinofanira kurodha pasi mapakeji eInternet uye kubatana kwangu hakundibatsire neizvozvo. Ini ndinofunga izvi ndizvo zvikonzero zviviri zvikuru.
Mune ichangoburwa Chackra ISO netinstall inosanganisirwa iyo inobvumidza iwe kuti uite mashoma kuisirwa, yakafanana neArchlinux's kdebase. Ivo zvakare vakasiya parutivi mabundles uye ikozvino inosanganisa imwe yekuwedzera yekushandisa kweGTK.
Asi ndinogona here kushandisa imwechete Arch repositories?
Kwete, izvo zvakachengetwa hazvina kufanana. Kune nzira dzekuishandisa, asi hazvikurudzirwe.
Zvinonzwisa tsitsi sei, ipapo Chakra haindishandire 🙁
Uye wakamboedza Slackware 14? Ndakaiyedza uye iyo KDE inoita kunge XFCE. Ini ndinonyatsoda iyo distro nekuti iwe unogona kugadzirisa ne slapt-tora uye wedzera kutsamira wega wega ne slackpkg.
Zvakanakisa: koni yaro yakanyatsogadzirwa (inokubatsira pasi kudiki diki).
Kwayedza MANJARIO ndeyeChakra asi pamusoro pekuve yakapusa iri yakawanda-desktop uye yakazara arch inoenderana.
Sevha yakawanda nguva uine yakanakisa presets uye Ubuntu-senge kuisirwa
Zano diki kuitira kuti kana gadziriro yekumisikidza yaitwa irambe ichingove inoshanda, zvinokurudzirwa kuti phonon-vlc iwedzerwe, saka rairo raizove:
pacman -S kde-base phonon-vlc kde-l10n-es
zvikasadaro gwara rakanaka kune avo vachiri vasingatsunge.
Kazhinji paunenge uchiisa kde pacman inokubvunza iwe kuti ndeipi phonom yekuisa.
Ndizvozvo ... kana iwe ukaita pacman -S kdebase pacman inokubvunza kuti ndeipi phonon yaunoda kuisa ...
Ndinoda pacman! 😀
Kare kare ini ndaive neArch neGnome, Xfce uye KDE
Ini ndinogara ndichirova makuru makuru uye ini ndochinja nekuda kwehusimbe
Asi Arch iArch, mazwi makuru 😉
Shandisa Slackware. Icho chakati trite, asi kwete padanho rine Arch.
elav, ini ndinopa zano: shambadzira nhanho-nhanho gwara pakuisa Arch ine encrypted LVM uye neTrIM rutsigiro rweSSDD ini ndoda kuisa Arch pane yangu laptop, asi kwete mune yepamutemo yekumisikidza gwara haina kufunga nezve mukana uyu, uye Ndinofunga kuti zvaizobatsira vanhu vazhinji. Kutenda uye zvakanaka zvese.
Pindura kune archdeb
Ndingafarire kukubatsira asi ini handina SSD yekuita miedzo nayo .. 🙁
Huye, chikamu cheSSD ndicho chakanyanya kukosha, asi ndinorangarira zvisirizvo kwaive kuisa sarudzo mu cryptab, imwe mu lvm uye imwe muzvikamu. Asi kuiswa pamwe ne100% yakavharidzirwa system uye LVM yakaoma. Ini ndinogona kukuwana iwe kana iwe uchida chinongedzo chandaive nacho icho chakatsanangura maitiro zvishoma asi kwaGentoo, zvinogona kubatsira: p
Arch yakanaka kwazvo, asi iyo arch nzira ndeye KISS + RTFM uzivi, saka ndinogona kuisa MATE + Openbox uye kuisa Iceweasel seye default browser.
Kunze kwezvo, pachave neLTS vhezheni yeArch yekushandisa?
Mr. Linux akadaro
Uchishandisa ArchLinux zvakare nekutenda kumagadziriro ayo ekuisa.
Pindura kuna Mr. Linux
Ngatione kana rimwe zuva ndichiedza ARCH, Ndichiri neMageia 3 ine KDE 4.10.4 X86_64 kuvaka
Ini handisi kuwana mutambi senge winamp yekde D:
qmmp ndomumwe wevatambi vane ruzha rwakanyanya mu linux uye yakafanana ne winamp. Izvo zvakanyorwa mu qt. Iyo yakaenzana yakakura kunyange iine mashoma nzira.
Googling Audacious, uye wozondiudza kana wawana Winamp yakafanana paLinux.
Ndanga ndiine Arch kweanoda kusvika makore mashanu uye sekureba semakomputa angu maviri (mashanu-makore desktop uye yegore rimwe bhuku rebhuku) kutsigira kuburitsa kuburitswa kweiyi distro, ini handisi kuzoichinja chero chinhu, kana ini haichagone kuendesa kune Debian. Ini ndanga ndichishandisa Openbox pane netbook uye desktop kwenguva yakati wandei ikozvino asi ndaive kupenga uye ndakaisa KDE pabhuku rekunyora kuyedza. Ndakafarira KDE zvakanyanya, chakashata ndechekuti inodya bhatiri, muOpenbox (mushure mekuimisikidza) yaingoda maminetsi gumi kuti ipedze maawa matatu ayo yakagara muWindows uye neKDE inongogara maawa maviri zvisinei kuti mangani zvirongwa kana marongero andinogadzirisa.
Chekupedzisira, Arch Linux inokumbira yakawanda kana yakawanda kutarisisa kupfuura musikana wako: kana iwe ukasazvigadziridza kweinopfuura mwedzi uye ukasarudza kuzvimisikidza nekukasira, ichatsemuka, kana ukazvigadziridza usina kuverenga nhau, iwe zvirokwazvo ichachityora. Naizvozvo usasiye iyi distro uye kana iwe uchida chimwe chinhu, tarisa kutanga kuti chinonzwa sei 🙂
Izvo zvakanaka kuti ugare uine cd mhenyu inobatsira kupinda iyo yepamutemo saiti uye kuverenga maitiro ekugadzirisa nyaya.
Nenzira: kurodha arch !!!!
Iyi distro inobata pfungwa dzangu, ndiri kuenda kuzoona kana vhiki ino yevhiki ndine nguva yekuyedza.
Isa uye gadzirisa Qemu-KVM pane Arch Linux [Yakagadziridzwa]
PyGTK 3: mini GUI dzidziso nePython + GTK + 3